Nguva Yokumboonana Semhuri: Chinoita Kuti Vamwe Vapemberere Krisimasi
“Tarirai! Zvakanaka sei uye zvinofadza sei kuti hama dzigare pamwe chete dzakabatana!”—PISAREMA 133:1.
VaIsraeri vaiva “hama,” kana kuti vanhu vomumhuri imwe chete nokuti vose vakabva kumunhu mumwe chete Jakobho, uyo ainziwo Israeri. Saka pavaiungana pamitambo muJerusarema chaiva chinhu ‘chakanaka’ uye ‘chinofadza.’ Mhuri dzakawanda mazuva ano dzinotarisirawo kuzova pamwe chete uye kuva nenguva ‘yakanaka neinofadza’ paKrisimasi.
Bhuku rinonzi Encyclopedia of Christmas and New Year’s Celebrations rinoti: “Matambudziko maduku anosangana nemhuri mukati megore kazhinji anowanzopedzisira aita segomo chairo panoungana mhuri pamazororo.”
‘Ramba uchiripa muripo wakakodzera kuvabereki vako navanasekuru.’ (1 Timoti 5:4) Edza nepaunogona napo kuti ugare uchishanyira hama dzako uine mhuri yako. Kunyange kana hama dzako dzichigara kure, unogona kugara uchitaurirana nadzo. Unodii kuvanyorera tsamba, kuvafonera uye kutaura navo paIndaneti? Kugara muchitaura mose kunoita kuti kunetsana kuite kushoma.
“Makamanikidzika murudo rwenyu rukuru. . . . Wedzerai.” (2 VaKorinde 6:12, 13) Kungoonana nehama kamwe chete pagore kunogona kuita kuti muite sevatorwa, uye vana venyu vangasatoziva kuti mune ukama nadzo. Vamwe vana vanoona sokuti vanasekuru nanambuya nevamwewo vasiri vomumba, hadzisi hama dzavo dzepedyo. Saka kokai vanhu vakuru voukama kumba kwenyu kuitira kuti vana venyu ‘vawedzere’ rudo rwavo. * Vana vanova nenguva yakawanda vaine vanhu vakuru vanowanzopedzisira vava kunzwira tsitsi uye kukoshesa vanhu vakura.
“Kutaura shoko rakakodzera panguva yakakodzera kunofadza chaizvo.” (Zvirevo 15:23, New Century Version) Mungaita sei kuti kusawirirana kana kuti dzimwewo nyaya zvisapedzisira zvamutsa matambudziko akakura nevoukama? Chimwe chamungaita kutsvaka “nguva yakakodzera” yokukurukura nyaya dzinokosha. Kana muchigara muchitaurirana, hazvizokuomerei kuonana nehama dzenyu kuti mugadzirise zvinenge zvichinetsa uye muchava nenguva ‘yakanaka neinofadza’ pamunoungana.
^ ndima 9 Ona nyaya dzinoti, “Nei Ndichifanira Kuziva Vanasekuru Vangu?” uye “Ndingava Sei Noukama Hwepedyo Navanasekuru Vangu?” dziri muMukai! yaMay 8 2001 neyaJune 8 2001, dzakabudiswa neZvapupu zvaJehovha.
Rudo Nemufaro Panguva yeKrisimasi—Nguva Yokumboonana Semhuri